कोठा खोज्दै प्रचण्ड !
काठामडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भाडाका लागि घर खोजीरहेको बताएका छन । शैलुङ इन्टरप्राइजेजका प्रमुख तथा उनका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीसँग जोडेर आफूलाई बदनाम गरेको भन्दै आफ्ना लागि नयाँ घर खोजीरहेको बताए ।
आइतबार वेलुका जनता टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै नेता प्रचण्डले राम्रो घर भेटिए छिट्टै सर्ने बताए । पछिल्लो पटक मल ल्याउन नसकेर कारवाहीमा परेका अधिकारीको विषयलाई लिएर प्रचण्डको बदनाम भइरहेको छ । ‘पटकपटक यो मेरो घरबेटी भन्ने कुरा आएको छ। अब यो घरबेटीले कहाँ ठेक्का लिन्छन् ? के गर्छन् ? मलाई केही थाहा पनि छैन’, उनले भने, ‘यी ठेक्का भनेका त म यो घरमा आउनुभन्दा धेरै पहिलेका ठेक्का हुन् । मसँग कुनै गोरु बेचेको साइनो पनि छैन।’